Mashiinka Baakadaha Nacnac ee Iibka | Yanrich
Guri > Wax soo wadaban > Mashiinka xirmada nacnaca
-Ga / -daMashiinka Baakadaha Nacnac Waa nooc ka mid ah abaabulka xawaaraha sare, hal mashiin oo leh howlo badan, oo si dhakhso leh ayey u xirxiri kartaa nacnaca dufcadaha. Mashiinka xirmada nacnaca ee si otomaatiga ah ayaa guud ahaan sahlan in la shaqeeyo, si fudud loo nadiifiyo, fududahay in la ilaaliyo, meelaynta saxda ah, xawaaraha sare iyo xasilloon, waana fududahay in la beddelo badeecadaha kaladuwan. Isticmaalka mashiinka baakadaha si otomaatigga ah ayaa si wax ku ool ah u yarayn kara wax soo saarka iyo wanaajinta waxtarka wax soo saarka.
Qiimaha mashiinka mashiinka xirxiran ee nacnaca, waa in lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo moodallada la soo iibsaday iyo shuruudaha loo habeeyay. Waqtigan xaadirka ah, mashiinnada baakadaha nacnaca badanaa waxaa ka mid ah mashiinnada carafta leh ee candhuufta, iyo noocyo kale, iyo sidoo kale mashiinadaha baakadaha nacnaca otomaatiga ah iyo mashiinnada baakadaha oo si otomaatig ah oo xirxiran. Yinrich waxay bixisaa mashiinka mashiinka hambalyada ee Shukaanska ee Shukaanska si ay ula kulmaan baahiyaha kala duwan ee macaamiisha, soo dhawow si ay ula tashanayaan!
Jarida QNB500 jumlada iyo Double Candy marooji xirxirida Machine qiimo wanaagsan - Yinrich Technology
Jarida Yinrich Technology Daad QNB500 iyo Double Candy marooji xirxirida Machine qiimo wanaagsan - Yinrich Technology, 1 sano xiran kuwa dheeri sahaydaQNB500 Jarida iyo Double marooji Machine xirxirida Candy.
Mashiinka Nooca Caymiska Nooca ee Maabbaada ee Mashiinka
Tiknolojiyaddan tikniyoolajiyadda yo tikniyoolajiyadda ah ee mashiinka xirxirayaasha ah ee Marshmallow Soosaarayaasha Marshmallow ee Shiinaha, majaajillo tayo sare leh iyo mashiinada shukulaatadaMashiinka xirxirayaasha nooca sw-barkinta ee marshmallow.
Kubadda Lollipop-ka Liiska Mashiinka Maqaarka
Kubadda Lollipop-ka Liiska Mashiinka MaqaarkaTani waa mashiinka duuban ee dhowaan la diyaariyey gaar ahaan loogu talagalay nooca lollipops nooca kubadaha.Waa xawaare sare iyo shaqo la isku halleyn karo.